တရုတ်ခေါက်သေတ္တာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | Xintianda
ဖုန်း ၀၀၈၆ ၁၃၈ ၅၄၂၀၃၄၈၁
အဖုံးနှင့် Base သေတ္တာများ
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: Art Paper, Kraft Paper, CCNB, C1S, C2S, Silver or Gold Paper, Fancy Paper etc ... နှင့်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ
အတိုင်းအတာ အားလုံးစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား & ပုံစံများ
ပုံနှိပ်ပါ CMYK, PMS, ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းမရှိပါ
မျက်နှာပြင်အင်္ဂါရပ် တောက်ပပြီး matte lamination၊ hot stamping, flock printing, creasing, calendaring, foil-stamping, crushing, varnishing, embossing, etc.
ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ် သေဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကပ်ခြင်း၊ အမှတ်ပေးခြင်း၊ ဖောက်ခြင်းစသည်
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T/T၊ Western Union၊ Paypal စသည်
အရေးအပါဆုံးအရာသည်၎င်း၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်း၊ စက္ကန့်ပိုင်းခေါက်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဖက်ရှင်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးနောက်ထပ်ရှာကြည့်ဖို့မကူညီနိုင်ခဲ့ဘူး။ ခေါက်လက်ဆောင်သေတ္တာ ၈ လုံး၏ပမာဏသည်သာမန်လက်ဆောင်သေတ္တာ ၁ လုံးနှင့်ညီသည်။ နေရာအကန့်အသတ်နှင့်ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိသောထုတ်ကုန်များအတွက်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ခေါက်လက်ဆောင် box တွင်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးပျက်စီးရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ခေါက်ထားသောလက်ဆောင်သေတ္တာကိုအပိုင်းပိုင်းသို့ဖြန့်လိုက်သည်၊ ထို့ကြောင့်ခေါက်ရန်လွယ်ကူသောထုပ်ပိုးရန်လွယ်ကူသော၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင့်တော်သော၊ ခိုင်မာသောချုံ့ရန်၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ။ ခေါက်လက်ဆောင်သေတ္တာတွင်အထူးသဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုပ်ပိုးမှုအပိုင်းလေးများအတွက်အသုံးချမှုမျိုးစုံရှိသည်။ ကလေးထုတ်ကုန်များ၊ ဖိနပ်များနှင့်အဝတ်အစားများ၊ ပျော့ပျောင်းသောကစားစရာများ၊ အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ၊ အိမ်သုံးချည်ထည်များ၊ သိုးမွှေးထိုးထုတ်ကုန်များ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ သေးငယ်သောအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၊ ဝိုင်နီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များစသည်တို့သည်ခေါက်သေတ္တာကိုသုံးရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းကိုအသုံးမပြုပါက၎င်းကိုလှစ်ဟပြပြီးပြားချပ်ချပ်ချထားသည်။ ၎င်းကိုခေါက်သောအခါ၎င်းသည်သံလိုက်ပါသောလက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၁ the ကုန်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ပါ။
gravure ပုံနှိပ်ခြင်း၊ lithography ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးပုံနှိပ်ခြင်းစသည့်ခေါက်နိုင်သောထုပ်ပိုးသေတ္တာမျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခေါက်သေတ္တာကိုပန်းကန်ပြားနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး၊ ခေါက်ထားတဲ့သေတ္တာရဲ့လှပတဲ့ပုံသဏ္toန်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ခေါက်သေတ္တာကိုအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကတ်ထူကတ်ထူပြားများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ သေခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းများနှင့်ကပ်ထားသည်။ ပလတ်စတစ်၊ ဖန်၊ သတ္တုနှင့်အခြားပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခေါက်သေတ္တာ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သက်သာသည်။ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုနည်းသောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ငန်းအများစု၏ချစ်မြတ်နိုးပြီးထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းတွင်စားသုံးသူအများစုကအသိအမှတ်ပြုသည်။
4 ။ လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
အတန်းလိုက်ဓားမှတဆင့်ခေါက်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်စက္ကူသေတ္တာများကိုစက္ကူသေတ္တာအမျိုးမျိုး၏ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသောကြောင့်၎င်းကိုထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းတွင်အလွန်အမင်းရှာဖွေသည်။
5 transport သယ်ယူရန်လွယ်ကူပြီးသိုလှောင်ရန်။
ခေါက်သေတ္တာ၏အကြီးမားဆုံးသောလက္ခဏာမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းသိမ်းပိုက်ထားသောနေရာကိုလျှော့ချပေးနိုင်သော၎င်း၏ခေါက်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း extrusion ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောခေါက်သေတ္တာများပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏ခေါက်ခြင်းသည်သိုလှောင်မှုကိုအလွန်အဆင်ပြေစေသည်၊ သိုလှောင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသောအခါအလွန်သေးငယ်သည့်နေရာကိုယူသည်။
အောက်ပါစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တောင်းဆိုချက်အများစုအတွက်စျေးနှုန်းကိုးကားခြင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် ၂-၄ နာရီအတွင်းအီးမေးလ်ပို့သည်။ ရှုပ်ထွေးပရောဂျက်တစ်ခုသည် ၂၄ နာရီကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်ကိုးကားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင့်အားနောက်ဆုံးသတင်းများကိုအမြဲပေးလိမ့်မည်။
အမှတ်မရှိပါ၊ သင်၏မှာယူမှုအရွယ်အစားမခွဲခြားဘဲပြင်ဆင်မှုသို့မဟုတ်ပန်းကန်အခကြေးငွေကိုကျွန်ုပ်တို့မကောက်ခံပါ။ ငါတို့သည်လည်းမည်သည့်ဒီဇိုင်းအခကြေးငွေမှမကောက်ခံပါ။
1. စီမံကိန်း & ဒီဇိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
2.Quote ပြင်ဆင်မှု & အတည်ပြုချက်
4. နမူနာ (တောင်းဆိုချက်အရ)
ဟုတ်ကဲ့၊ စိတ်ကြိုက်နမူနာတွေကိုတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်၏ hard copy နမူနာများကိုအနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေဖြင့်တောင်းနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်စီမံကိန်းများအားအခမဲ့နမူနာတောင်းနိုင်သည်။
hard copy နမူနာများအတွက်အမှာစာများသည်စီမံကိန်း၏ရှုပ်ထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်ရန် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ အပြီးသတ်အနုပညာလက်ရာနှင့်အမိန့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်အလုပ်ချိန် ၁၀ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာဤအချိန်ဇယားများသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သင်၏အထူးစီမံချက်၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများပေါ်တွင်အလုပ်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအထောက်အကူအဖွဲ့သည်အော်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းသင်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားများကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မည်။
Xiaozhoucun စက်မှုဥယျာဉ်၊ Chengyang ခရိုင်၊ Qingdao၊ တရုတ်
တယ်လီဖုန်း၀၀၈၆ ၁၃၈ ၅၄၂၀၃၄၈၁
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းကို ၂၀၂၁ တွင်ခေတ်စားသည်